Liiska Ganacsatada MediaLight - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Liiska Ganacsatada MediaLight
Waxaan bixinaa maraakiibta adduunka oo dhan, laakiin waxaad badanaa badbaadin kartaa waqti iyo lacag adoo adeegsanaya ganacsade maxalli ah. Medialight waxaa iibiya shabakad yar oo aqoon leh laakiin aqoonyahanno adduunka ah.
B&H Sawir iyo Video
Flanders Sayniska EU
MediaLight Shiinaha (oo lagu dhammaystiray degelkan)
Waxaan hadda haysanaa sahay kooban Shiinaha. Waxaan geynay waxkasta ganacsatadeena caalamiga ah kahor Sanadka Cusub ee Shiinaha. Waxaan rajeyneynaa inaan haysano wax walba oo kaydka ku ah Shiinaha markale dhammaadka Abriil.